Iphrofayela Yenkampani Namasiko - ILongou International Business (Shanghai) Co., Ltd.
Iphrofayela Yenkampani Namasiko
I-Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC
I-Hydroxyethyl Methyl Cellulose HEMC
I-Hydroxyethyl Cellulose HEC
Ibanga le-RDP elingathathi hlangothi
I-RDP Ibanga Eliqinile
I-RDP Flexible Ibanga
I-RDP ayinayo i-Formaldehyde
Ibanga le-RDP Hydrophobic
Ukuthuthukiswa kwewebhu nokumaketha
ILongou International Business (Shanghai) Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka we-2007 futhi itholakala esikhungweni sezomnotho - eShanghai. Kungumakhi wamakhemikhali wokwakha izithasiselo nomhlinzeki wezixazululo zohlelo futhi uzibophezele ekuhlinzekeni izinto zokwakha nezixazululo zamakhasimende omhlaba jikelele.
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-10 yentuthuko eqhubekayo nokuqanjwa kwezinto ezintsha, i-LONGOU INTERNATIONAL ibilokhu ikhulisa isikali sayo sebhizinisi eSouth-Asia Asia, Middle East, Europe, America, Australia, Africa nakwezinye izifunda ezinkulu. Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezikhulayo zomuntu siqu zamakhasimende angaphandle kanye nokwenziwa kwamakhasimende okungcono, inkampani imise ama-ejensi wensizakalo aphesheya kwezilwandle, futhi yenze ukubambisana okukhulu nabenzeli nabasabalalisi, kancane kancane yakha inethiwekhi yesevisi yomhlaba.
I-LONGOU INTERNATIONAL igxile ku-R & D, ukukhiqizwa nokumaketha kwe-Cellulose ether (HPMC, HEMC, HEC) neRedispersible polymer powder nezinye izithasiselo embonini yezokwakha. Imikhiqizo ihlanganisa amamaki ahlukene futhi inamamodeli ahlukahlukene omkhiqizo ngamunye.
Izicelo zifaka udaka lwe-drymix, ukhonkolo, ukumbozwa kokuhlobisa, amakhemikhali ansuku zonke, insimu kawoyela, uyinki, ubumba nezinye izimboni.
KULOKHO ukuhlinzeka amakhasimende womhlaba wonke ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, insizakalo ephelele nezixazululo ezihamba phambili ngemodeli yebhizinisi yomkhiqizo + wezobuchwepheshe + wensizakalo.
Sinikeza insizakalo elandelayo kumakhasimende ethu
Funda izakhiwo zomkhiqizo womncintiswano.
Siza iklayenti ukuthi lithole ibanga elifanayo ngokushesha nangokunembile.
Isevisi Yokwakha ukwenza ngcono izindleko nezindleko zokusebenza, ngokuya ngesimo sezulu seklayenti ngalinye, izakhiwo ezikhethekile zesihlabathi nosimende, kanye nomkhuba wokusebenza oyingqayizivele.
Sobabili i-Chemical Lab neLebhu Lokusebenza ukuqinisekisa ukwaneliseka okuhle kakhulu kwe-oda ngalinye:
Amalebhu amakhemikhali ukuvumela ukuthi sihlole izakhiwo njenge-viscosity, umswakama, izinga lomlotha, i-pH, okuqukethwe kwamaqembu e-methyl ne-hydroxypropyl, degree substitution njll.
Ilebhu yesicelo ukusivumela ukuthi silinganise isikhathi esivulekile, ukugcinwa kwamanzi, amandla wokubambelela, ukumelana kweslip kanye ne-sag, isikhathi sokubeka, ukusebenza njll.
Izinsizakalo zamakhasimende ezinamalimi amaningi:
Sinikeza izinsizakalo zethu ngesiNgisi, iSpanishi, isiShayina, isiRashiya nesiFulentshi.
Sinamasampula namasampula esiphikisayo enkatho ngayinye ukuqinisekisa ukusebenza kwemikhiqizo yethu.
Sinakekela inqubo yezinto kuze kube lapho kuthunyelwa khona itheku lapho ikhasimende liyidinga khona.
Inkampani ukukhiqizwa umthamo isibonisi
ILongou International Business (Shanghai) Co, Ltd. yasungulwa ngo-2007 futhi ibilokhu ikhiqiza izinto zokwakha zamakhemikhali iminyaka eyi-14. Sinezimboni zethu kulayini ngamunye wokukhiqiza futhi imboni yethu isebenzisa imishini engenisiwe. Ngemodeli eyodwa yomkhiqizo owodwa, singaqedela cishe amathani angama-300 ngenyanga eyodwa.
Ukukhiqizwa nokuhlolwa kobuchwepheshe
Iqembu le-R & D eliqinile, bonke bangabachwepheshe bamakhemikhali wokwakha futhi banolwazi kulo mkhakha. Zonke izinhlobo zemishini yokuhlola elabhoratri yethu engahlangabezana nokuhlolwa okuhlukile kocwaningo lwemikhiqizo.
Le nkampani yasungulwa uMnu Hongbin Wang egameni lenkampani Shanghai Rongou Chemical Technology Co., Ltd. Futhi uqale ukubhekana ibhizinisi ukuthekelisa.
Abasebenzi bethu bakhuphuke baba ngaphezu kwabasebenzi abayi-100.
Igama lenkampani selishintshile laba yiLongou International Business (Shanghai) Co., Ltd ..
Inkampani yethu isungule inkampani yegatsha iPuyang Longou Biotechnology Development Co, Ltd.
Siqala ukwakha ifektri entsha ekhiqiza i-emulsion - iHANDAO Chemical.
ILONGOU INTERNATIONAL njengamanje inabasebenzi abangaphezu kwekhulu kanti ngaphezulu kuka-20% baneziqu zeMasters noma zeDoctor. Ngaphansi kobuholi bukaSihlalo uMnu Hongbin Wang, sibe yiqembu elivuthiwe embonini yezithasiselo zokwakha. Siyiqembu lamalungu amancane futhi akhuthele futhi agcwele umdlandla womsebenzi nempilo.
Intuthuko yethu isekelwa yisiko lenkampani eminyakeni edlule. Sikuqonda kahle ukuthi isiko lakhe lezinkampani lingakhiwa kuphela nge-Impact, infiltration and Integration.
Umsebenzi wethu: Yenza izakhiwo ziphephe, zonge amandla, futhi zihle kakhulu;
Ifilosofi yebhizinisi: isevisi yokumisa okukodwa, ukwenza ngezifiso okwenziwe ngezifiso, bese ulwela ukudala inani elikhulu kunawo wonke amakhasimende ethu;
Amanani ayisisekelo: ikhasimende kuqala, ukusebenzisana, ukwethembeka nokwethembeka, ukwenza kahle;
Umoya weqembu: iphupho, uthando, umthwalo wemfanelo, ukuzinikela, ubumbano kanye nenselelo kokungenzeki;
Umbono: Ukufeza injabulo namaphupho abo bonke abasebenzi be-LONGOU INTERNATIONAL.
Abanye babathengi bethu
IMISEBENZI EYESABEKAYO UKUTHI IQEMBU LETHU LINIKELELE KUMAKlayenti ETHU!
Isibonisi amandla isibonisi
Yiba yi-100% ebhekele izikhalazo zekhwalithi, ukukhishwa kwekhwalithi engu-0 ekusebenzelaneni kwethu kwangaphambilini.
Amakhulu imikhiqizo emazingeni ehlukene inketho yakho.
Amasampula amahhala (ngaphakathi kwe-1 kg) anikezwa nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwemali yenkampani yenethiwekhi.
Noma imiphi imibuzo izophendulwa kungakapheli amahora ayi-12.
Ngokuqinile ekukhetheni izinto zokusetshenziswa.
Intengo enengqondo neyokuncintisana, ukulethwa ngesikhathi.
Rm3301, Isakhiwo 1, No. 700, Liquan Road, Putuo District, Shanghai, China
© Copyright -2021: Wonke Amalungelo Agodliwe.